ခန္ဓာမှာအနှစ်ရှာ သီလပါ	Posted on October 17, 2009	by mettayate ရှေးကနဦးအခါက လူအပေါင်းတို့သည် သက်ရှိသတ္တ၀ါတို့ကို မသတ်ဖြတ်ကြ။ အသားကိုလည်း မစားကြ။
This entry was posted in ထေရ၀ါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာ and tagged ထေရ၀ါဒ. Bookmark the permalink.	← လောကကြီးငြိမ်းချမ်းစေချင်ရင်